धादिङे नेताहरु अल्पज्ञानी महाभ्रष्ट बुद्धि | DhadingOnline
By: admin प्रकाशीत मिति: September 27, 2016
हालसम्म 14 जनाले पढ़िसके |हेडलाइन
सरकारी बन देखि सार्बजनिक क्षेत्र कसैले पनि मिच्न पाउदैन भने बन कार्यालयको अनुमति बिना बनले चर्चेको जग्गा जमिन भित्र भवन निर्माण समेत गर्न पाईदैन भनेर ऐनमा स्पष्टरुपमा तोकेर लेखिएको छ ।
चर्चित खोजी पत्रकार हरिहर सिंह राठौरले धादिंग जिल्लाको बन तथा सार्वजनिक जग्गामा मिचेर बनाइएको रेडियो स्टेसन देखि होटलसम्मको विषयमा पटक पटक समाचार बनाएर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समाचारको प्रभाव र जनताको बिरोधको प्रभावले बन तथा सार्बजनिक जग्गामा मिचेर बनाइएको भवनहरूलाई बन तथा प्रशासन मिलेर भत्काइने काम समेत भएको भनेर समाचार पनि पढ्न पाईयो । भत्काइएको संरचनामा रेडियो, होटेल देखि अन्य भवनहरू थिए ।
धादिङका नेताहरूको कारण समय समयमा धादिङ जिल्लाको समाचारहरू पत्र पत्रिकाहरूमा धाराप्रवाहरूपमा प्रकाशित भैरहेको छ । नेताहरूनै अल्पज्ञानी भए पछि बुद्धि त महाभ्रष्टनै हुने भयो भन्ने कुरा धादिङ जिल्लामा हालै घटेको विभिन्न घटनाहरूले पुष्टि समेत गरिसकेको छ ।
जनताले चुनेका नेपालका नेताहरू कानून देखि प्रशासनिक कार्यमा के कति दक्खल राख्दा रहेछन सामाजिक संजाल फेसबुकमा Yajna Dahal ज्युले पोस्ट गर्नुभएको तलको भनाईहरू पढ्नु भए पछि छर्लंग हुन्छ । तल हेर्नुहोस उहाँले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको स्टाटस ।
धादिङका माननीयज्यूले त्याहांका जिल्ला वन अधिकृतले कानून मिचेर अमरावति सामुदायिक वनमा बनेको भवन भत्काएको भनेछन् । वन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने प्रावधान छ । बनाउनै परे पनि जिल्ला वन कार्यालयको अनुमतिले मात्र बनाउन सकिन्छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको यो कानूनी प्रावधानको जानकारी विनै जिल्ला वन अधिकृतले सामुदायिक वनमा गैह्रकानूनी रुपमा वनेको घर भत्काउँदा उल्टै कानून विपरित काम गरेको भन्ने सार्वजनिक वक्तव्य व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्दा माननीयज्यूहरूको कानूनी ज्ञान कतिरहेछ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त अनुसार राज्यको कानून निर्माण गर्ने विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने Body of the people जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक परिपाटीमा कस्ता व्यक्तित्व चुनिएर जाँदा रहेछन् ? यो देखेर यो हरिलठ्ठक विधायिका भनेको केहो ? त्यहाँ कस्ता मान्छे चुनिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न web site हेर्नतिर पो लाग्यो ।
धादिंग जिल्ला राजधानी काठमान्डौसँग जोडिएको जिल्ला हो भने राजनीतिक हिसावले कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ । धेरै नपढेका तर देश देखि बिदेशमा चर्चित बन्न सफल भएका पत्रकार ऋषि धमला पनि धादिङ जिल्लाकै निवासी हुन । पत्रकार धमलाको विषयमा के बयान गराई भो र ।
पृथ्वी तथा त्रिभुवन राजपथ देखि चर्चित केरुंङ राजमार्गले छुने यो जिल्ला केही वर्ष देखि बदनाम जिल्लाको रुपमा प्रख्यात हुँदै गएको देखिदैछ र यस्तो हुनुमा अन्य कोही नभएर जनताले चुनेको नेताहरू, ती नेताले पालेका, हुर्कार संरक्षणमा राखेका गुण्डा र नेताहरूको इसारामा त्यही गुण्डाहरूले मच्चाएको विभिन्न आतंकहरू पर्दछन । उदाहरणको फेहरिस्त लामै छन ।
हाम्रो गाउँ समाजमा ‘अल्पज्ञानी महाभ्रष्ट बुद्धि’ भन्ने चर्चित उखान छ । त्यही उखान अहिले धादिङ जिल्लाका नेताहरूमा लागु भएको देखिन्छ । धादिङे नेताहरूले संरक्षण नदिने हो भने समाजमा आतंकको बिउ रोप्न सकिदैन । धादिङका नेताहरूको कारण समय समयमा धादिङ जिल्लाको समाचारहरू पत्र पत्रिकाहरूमा धाराप्रवाहरूपमा प्रकाशित भैरहेको छ । नेताहरूनै अल्पज्ञानी भए पछि बुद्धि त महाभ्रष्टनै हुने भयो भन्ने कुरा धादिङ जिल्लामा हालै घटेको विभिन्न घटनाहरूले पुष्टि समेत गरिसकेको छ ।
एउटाले बिरायो साखालाई पिरायो भन्ने नेपाली उखानलाई बुझ्ने क्षमता राख्छन भने अब धादिंग मात्र नभएर देश भरिका जनताहरूले राष्ट्र तथा जन बिरोधि काम गर्ने नेताहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई समयमै दण्ड दिन सक्नु पर्छ । यदि नेताहरूलाई पुल्पुल्याएर शिरमा राख्छन भने ‘गुनले गुन खान्छ, म तलाई खान्छु’ भन्ने उखानलाई व्यवहारमा लागु गर्न बेर लाउदैनन ।